Digital Laser Ilebula Die-umsiki
I-CO2 Laser Cutting Machines
IGoldenlaser, umkhiqizi oholayo kanye nomhlinzeki wemishini ye-laser, waklama futhi wakhe izinhlelo ezijwayelekile nezokwezifiso ze-CO2 laser cutting, umbhalo oqoshiwe nezinhlelo zokumaka ezinhlobonhlobo zezicelo.
Ukuqala ngamamodeli ayisisekelo ahlukahlukene, imishini ingakhiwa futhi iguqulelwe ekusetshenzisweni kwemboni ethile idinga ukuthola izixazululo ezinhle kakhulu zokucubungula i-laser kanye nezinketho zokunweba. Hlola ezinye zezicelozemishini yethu ye-laser.
Goldenlaser sika umkhiqizo iphothifoliyo CO2 imishini laser siqukethe umbono laser cutting imishini , flatbed laser cutting imishini , Galvo imishini laserfuthi laser die-osezingeni imishini . I-Goldenlaser ihlanganisa ukufohla ubuchwepheshe be-laser nobuchwepheshe besicelo obujulile ukunikeza ukusebenza okuphezulu kanye nezindleko eziphansi eziphelele.
Ifomethi enkulu CO2 Laser umsiki
Ibanga le-CO2 Flatbed Laser lenzelwe ukucutshungulwa kahle kwezinto ezinkulu zefomethi. Ifaka inqubo eqinile futhi eyizingqabavu ye-XY gantry nge-rack ne-pinion dual drive system, enikezela ngokukhipha kwekhwalithi ethembekile futhi engaguquguquki, kanye nejubane lokusika eliphakeme nokushesha.
Laser uhlobo: CO2 RF laser / CO2 ingilazi laser
Amandla e-Laser: ama-watts ayi-150, ama-watts angama-300, ama-watts angama-600, ama-watts angama-800
Indawo yokusebenzela: Ubude 2000mm ~ 8000mm, Ububanzi 1300mm ~ 3500mm
Buka wonke amamodeli
Ibanga le-CO2 Galvo Laser lisebenzisa ukusebenza okuphezulu kwe-galvanometer lasers kanye nezilawuli ngokunemba ukuhlinzeka ngejubane lokucubungula elisheshayo nemiphumela emihle kakhulu yokumaka noma yokuqopha izinto ezibonakalayo, nokusika nokugcobisa izinto ezincane kakhulu.
Amandla e-Laser: Ama-watts angama-80 ~ 600
Indawo yokusebenzela: 900x450mm, 1600mmx1000mm, 1700x2000mm, 1600x1600mm, njll.
I-Vision Laser ithuthukiswe ngokukhethekile futhi yenzelwe ukusika izindwangu nezindwangu eziphrintiwe, kuhloswe ukukhiqiza imiphumela esezingeni eliphezulu yokusika intaba ngejubane elisheshayo. Ifakwe ubuchwepheshe besimanje bekhamera, kufaka phakathi ukuskena endizeni, ukuskena amamaki wokubhalisa, nohlelo lwekhamera yekhanda. Ungakhetha indlela efaneleke kangcono uhlobo oluthile lomsebenzi wakho.
Laser uhlobo: CO2 ingilazi laser / CO2 RF laser
Amandla e-Laser: Ama-watts ayi-100, ama-watts ayi-150
Indawo yokusebenzela: 1600x1000mm, 1600x1300mm, 1800x1000mm, 1900x1300mm, 3500x4000mm
Digital Laser Die-umsiki
I-digital laser die cutter inikeza isisombululo esisha sokusika nokuqedela ukukhiqiza oku-in-time kanye nama-short-run futhi kufanelekile ukuguqula izingxenye ezinemba kakhulu kusuka ezintweni eziguqukayo kufaka phakathi amalebula, izinto zokunamathisela emaceleni amabili, amateyipu ama-3M, amafilimu, amafilimu akhanyayo, abrasive izinto zokwakha, njll.
Laser uhlobo: Laser laser CO2
Amandla e-Laser: Ama-watts ayi-150, ama-watts angama-300, ama-watts angama-600
Ubukhulu. ububanzi bokusika 350mm / 13.7 ″
Ubukhulu. ububanzi bewebhu 370mm / 14.5 ”
Usayizi omncane CO2 Laser umsiki
Ububanzi be-MARS Laser buhlinzeka ngezixazululo zokonga ukusika nokuqopha okungeyona eyensimbi ngamafomethi aze afike ku-1600 x 1000 mm. Ingafakwa ngezinhlelo zokuqashelwa kwekhamera. Ikhanda elilodwa, amakhanda amabili nezinkundla zokusebenza ezinhlobonhlobo ziyatholakala.
Laser uhlobo: CO2 ingilazi laser
Amandla e-Laser: Ama-watts angama-60 ~ 150
Indawo yokusebenzela: 1300x900mm, 1400x900mm, 1600x1000mm, 1800x1000mm
Ufuna ukwazi ukuthi imuphi umshini okulungele wena?
Uma ufuna umsiki we-laser ungabe usaqhubeka!
Ububanzi bethu obuhle kakhulu bakhelwe ukuhambisana nanoma yisiphi isicelo futhi singakwazi ukubhekela cishe zonke izidingo noma ngabe kungukukhiqizwa kwezimboni noma ibhizinisi elincane. Uzothola ukuthi imishini yethu ye-laser ayihambisani nokuthi ngabe yakho ihilela ukusika izinkulungwane zezingxenye noma izinhlelo zokusebenza ze-bespoke ezilodwa.
Xhumana manje ukuthola izeluleko zochwepheshe!